kkchha.com:: How to pass Lok Sewa Exam Nepal ?
How to pass Lok Sewa Exam Nepal ?
नियमित अध्ययन, सफा अक्षर र ओजपूर्ण शब्द चयनधेरै मध्यमवर्गीय नेपाली युवाको सपना हुन्छ– लोकसेवामा नाम निकालेर सरकारी जागिर खाने । नेपालमा निजामती सेवाको बढ्दो आकर्षणसँगै लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा झन्–झन् कठिन हुँदै गएको छ । लोकसेवा आयोगले यस वर्ष माग गरेको ४६५ शाखा अधिकृतका लागि बिसौँ हजारले आवेदन दिइसकेका छन् । त्यसैगरी उपसचिवका लागि पनि परीक्षा चलिरहेको छ । सेवा प्रवेशका लागि योग्य बन्न हजारौँ युवायुवती ट्युसन, कोचिङलगायत स्वअध्ययनसहित मिहिनेत गरिरहेका छन् ।तर, लोकसेवामा नाम निकाल्न सानोतिनो तपस्या नै गर्नुपर्छ भन्छन् भुक्तभोगीहरू । निरन्तरको मिहिनेतका साथमा धैर्य र आत्मबल पनि चाहिने उनीहरूको धारणा छ । हाल चलिरहेको उपसचिवको परीक्षा र आगामी माघ २५ मा हुने शाखा अधिकृतको प्रथमपत्र तथा चैतमा हुने थप पत्रका परीक्षार्थीका लागि उपयोगी हुने गरी हामीले ०६९ को सहसचिवको परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट भएका किरणराज शर्माको लोकसेवाको प्रवेश अनुभव र टिप्स समावेश गरेका छौँ :
सरकारी सेवामा रहँदा प्रत्यक्ष रूपमा देश र जनताको सेवा गर्न पाइने उद्देश्यले म यो सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । सार्वजनिक सरोकार, सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधार गर्दा समस्त नागरिकको जीवनयापनमा सुधार आउने र आत्मसन्तुष्टि पाइने तथा तत्कालीन अवस्थाको इज्जत, मानप्रतिष्ठाले पनि यो सेवामा आउन प्रेरित गरेको थियो । ०४५ वैशाखमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक पदमा नाम निकालेँ । त्यहाँ दुई वर्ष काम गरेपछि म नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायककै रूपमा गएँ । त्यतिवेलासम्म मैले प्रथम श्रेणीमा एमबिए उत्तीर्ण गरिसकेको थिएँ । त्यसपछि भने मलाई निजामती सेवामा नै प्रवेश गर्ने इच्छा पलाएर आयो । ०५१ मा लेखा अधिकृतको परीक्षा दिएँ, उत्तीर्ण भएँ । लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गर्दा दैनिकजसो कम्तीमा दुईदेखि चार घन्टा अध्ययन गर्थेँ । मैले ट्युसन वा कोचिङ कहिल्यै पढिनँ । दैनिकजसो नै आवश्यकताअनुसार अध्ययन गर्थेँ । खोजपूर्ण अध्ययन सामग्रीको संकलन गर्थेँ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरूले सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक सेवाप्रतिको स्पष्ट अवधारणा बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । अनि मात्रै परीक्षाको तयारी थाल्नुपर्छ ।
निरन्तर मिहिनेतको बलमा उपसचिवको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भएँ । उपसचिव हुँदा आकर्षक ठानिएका निकायमा जान कहिल्यै मरिहत्ते गरिनँ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा रहेर काम गरेँ । १० वर्ष उपसचिवको भूमिका निर्वाह गरेपछि २३ फागुन ०६९ मा मैले सहसचिवको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि पहिलो नम्बरमै नाम निकाल्न सफल भएँ । सहसचिव परीक्षाका लागि पनि मैले अत्यन्तै बढी मिहिनेत गरेँ । यद्यपि, मैले सरकारी कामलाई भने कहिल्यै ‘ह्याम्पर’ गरिनँ । बिहान चार–सात बजेसम्म र बेलुकी एक घन्टा गरी दैनिक चार घन्टा अध्ययन गर्थेँ । आफ्ना समकालीन साथीहरूसँग कोर्समा आधारित रहेर अन्तरक्रिया पनि गर्थेँ ।
पूर्वमुख्यसचिव तथा सचिवहरूसँग छलफल गरी आवश्यक ‘फिडब्याक’ लिन्थेँ । केही नयाँ विषय पाउनासाथ टिपोट गरिहाल्थँे । नोट बनाउनुभन्दा पनि कोर्ससँग सम्बन्धित हरेक विषय अध्ययन गर्ने क्रममा टिपोट गर्थेँ । टिपोट गरेका विषयलाई स्मरण गर्ने, पढ्ने र अभ्यास गर्थेँ । हरेक कोर्सबारे आफैं अवधारणा बनाउँथेँ र विश्लेषण गर्थेँ ।परीक्षामा सहभागी हुनुपूर्व केही महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सिलेबस अनुसारको नोट र सदैव सुधारका लागि थप सामग्रीको रुचिपूर्ण अध्ययन आवश्यक पर्छ । इन्टरनेट, विभिन्न पत्रपत्रिकाको अध्ययन, कोचिङ सेन्टरहरू, साथीहरूसँगको अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसका साथै प्रशासनिक क्षेत्रका सम्बन्धित प्रकाशन, पुस्तक र लेखरचनाको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट भइरहेका प्रयास, अध्ययन प्रतिवेदनहरू, सुधारका विषयहरू र नीतिहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्नुपर्छ । दैनिक शान्त जीवन, निश्चित आम्दानीबाट चल्ने प्रबन्ध, मैत्रीपूर्ण र हर्षपूर्ण पारिवारिक वातावरण बनाई पढाइको वातावरण अनुकूल बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी पढ्ने–लेख्ने, केही समय सम्झन प्रयास गर्ने गरी स्मरण शक्तिलाई तेज बनाउनुपर्छ । परीक्षामा लेख्दा राम्रो र प्रस्ट अक्षर तथा छोटो र ओजपूर्ण शब्द चयन गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार समसामयिक उदाहरणसहित प्रश्नले मागेको जवाफ दिनुपर्छ ।
कारण र प्रभाव लेख्ने
sourse : गुगल सहयोग बाट